Umculo weApple usungula uluhlu lwe-Replay ka-2022 ngowona mculo siwumamela kakhulu | Iindaba ze-iPhone
I-Apple Music isungula uluhlu lwe-Replay ka-2022 ngomculo esiwumamela kakhulu
Unyaka usanda kuqala, sisenendlela ende yokuhamba kwaye ngaphezu kwayo yonke into, eyona nto inomdla kuthi, kusekho into eninzi yokufumanisa malunga nabafana baseCupertino. Masibuyele ekuthetheni ngayo iinkonzo zedijithali ukusuka eCupertino, kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ndikuxelele malunga nenkonzo entsha yomculo weklasikhi kunye ne-app entsha (okanye hayi) eya kuza ukunyusa ikhathalogu ye-Apple Music. Kwaye ngokuchanekileyo namhlanje siyaqhubeka neendaba ezivela kwiApple Music. Ngaba ungomnye wabo baphulaphula umculo omnye ngokuphindaphindiweyo? I-Apple isandula ukukhupha uluhlu olutsha lwe-Rewind 2022. Qhubeka ufunda ukuba sikuxelela zonke iinkcukacha.
Uluhlu I-Apple's Rewind luluhlu olusibonisa iingoma esizimamele kakhulu ngokunyuka kolandelelwano, uludwe oluthile oluza kuhlaziywa veki nganye ukuze sikwazi ukubona iingoma ezisahleli phezulu, okanye ezo zivulela ezintsha indawo. Ekupheleni konyaka siya kukwazi ukubona amagqabantshintshi ngayo yonke into esenze ukuba sishukume imizimba yethu kulo nyaka ka-2022. Kuya kufuneka uye kuMamela ithebhu yoMculo weApple ukufumana olu luhlu lutsha lokudlala kuyo nayiphi na Iiapps zoMculo zikaApple ze-iOS, i-iPadOS, kunye ne-macOS. Kwaye ewe, ungafumana uluhlu lokudlalayo Buyisela umva ngo-2022 kwi-Android nakwinguqulelo yewebhu nguAppleMusic.
iyelelene kwi Spotify esongelweyo? ngendlela. Kwaye into enomdla ngeApple Music kukuba I-Rewind 2022 ihlaziywa unyaka wonkeEndaweni yoko, uSpotify usibonisa kuphela iingoma zethu eziphezulu ekupheleni konyaka. Ngamafutshane, iinkcukacha zeApple Music ezinokuthi zisenze sikhethe inkonzo enye okanye enye. Ekugqibeleni, thina sifanele senze isigqibo ngenkonzo esiyisebenzisayo. Kwaye wena, Ngaba uvela kuMculo weApple okanye uSpotify?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » Apple Music » I-Apple Music isungula uluhlu lwe-Replay ka-2022 ngomculo esiwumamela kakhulu
I-Apple ikhupha i-beta yesithathu ye-iOS 15.4, i-iPadOS 15.4, i-watchOS 8.5, kunye ne-tvOS 15.4
IPodcast 13x20: I-iPhone 13 isenguKumkani